Fepetram-barotra 21 hanentanana / hanelingelina ireo mpiara-miasa aminao | Martech Zone
Alarobia 17, 2011 Alarobia, Desambra 12, 2012 Douglas Karr
Nipetraka tao an-trano aho nanatrika famakiana anio alina. Lehilahy tsotra aho ary isaky ny misy terminolozy vaovao dia matetika aho no manindry ny Wikipedia mba hahitana hoe inona ilay novakiako. Mitsangana any ihany koa aho an-taonany maro… ka rehefa avy namaky azy aho dia nanodinkodina ny masoko ary niverina namaky.
Ny antony itodihako ny masoko dia satria ny mpanoratra (indrindra ny mpanoratra marketing) dia mahatsapa ho voatery hahay hamorona teny vaovao hianarantsika sy hisolo ireo teny tranainy sy mankaleo. Heveriko fa mahatonga azy ireo hahatsapa ho marani-tsaina kokoa raha mihemotra amin'ny tsy fahampiana isika.
Ireto misy sasany amin'ireo teny ireo:
Paid Media - Niantso an'io izahay taloha dokam-barotra.
Media nahazo - Niantso an'io izahay taloha teny-of-vava.
Haino aman-jery tompony - Niantso an'io izahay taloha fifandraisana amin'ny vahoaka.
Traffic - Niantso an'io izahay taloha fikorianan'ny or mpijery.
Gamification - Niantso an'io izahay taloha valim-pitia, tsy fivadihana, karatra or rafitra rafitra. Ny mariky ny skotisma zazalahy dia manodidina ny taona 1930, tsy olona vaovao ity.
Engagement - Niantso an'io izahay taloha Famakiana, mihaino, na fijerena (ary taty aoriana… fanehoan-kevitra)
Content Marketing - Niantso an'io izahay taloha soratra.
Antso-to-Action - Nantsoinay hoe doka banner io taloha. Satria tsy tao amin'ny tranokalanay ihany io dia tsy midika hoe mila anarana vaovao isika.
haingana - Niantso an'io izahay taloha fisondrotana.
Tabilao - (oh: ny sary sosialy) dia nohazavainay fotsiny hoe fifandraisana.
Authority - niantso an'io izahay taloha laza.
manatsara - Niantso an'io izahay taloha fanatsarana.
Curation - Niantso an'io izahay taloha fandaminana.
Scorecards - Nantsoinay ireo taloha dashboard.
Analytics - Nantsoinay ireo taloha tatitra.
Nohavaozina: olona - Nantsoinay ireo taloha fizarana mifototra amin'ny mombamomba ny fitondran-tena na ny demografika izay novolavolain'ny mpanome data.
an-tsary - Nantsoinay ireo taloha sary an-tsary, indraindray fanoharana data, na afisy. Ahantonay ao anaty cubicle ny zavatra mahafinaritra (er .. toeram-piasana).
Verbiage - Nantsoinay ireo taloha teny.
Whitepaper - Nantsoinay fotsiny ireo taratasy. Fotsy fotsiny no tonga ry zareo.
Humanisation - tsy niantso an'izay izahay taloha .. tsy maintsy mamaly an-telefaona na varavarana mivantana izahay.
Added: Marketing eo amin'ny tontolon'ny - Nantsoinay io atiny mavitrika na kendrena io.
Misy teny lehibe hafa koa…… hybrid, fusion, haingana, democratization, cross-channel, templatize, agregation, syndication, acceleration…
Mila mihemotra ny Google+ ireto tovolahy ireto, manaova torimaso kely ary manaparitaka azy amin'ny voambolana faha-8 tadidintsika. Fa maninona no ilain'ny olombelona foana ny miova? Angamba ny fiantsoana azy amin'ny zava-baovao dia hoe efa nivoatra isika? (Tsy mividy azy aho, sa tsy izany?).
Heveriko fa ny ankamaroan'ny orinasa dia mbola miady amin'ny marika tsotra na ny diplaoma amin'ny tranokala maloto, tsy maninona izany a fampielezam-peo haingam-pandeha nohavaozina nohavaozina noho ny fifandraisan'olombelona.
Raha ny marina rehetra, ataoko fa meloka ihany koa aho. Izaho dia manana masoivohom-baovao vaovao, tsy orinasam-pivarotana. Tena an maso ivoho miditra… Saingy niloka aho fa hisy foana media vaovao, fa mampihiditra mety hosoloina teny vaovao adala toa azy maranitra.
Fantatrao, mifanohitra amin'ny manintona.
Tags: hainganaAnalyticsfahefanamiantso amin'ny asaContent Marketingvarotra toe-javatracurationhaino aman-jery nahazoandraikitragamificationkisarymahaolonaMarketing Infographicsmanatsarahaino aman-jery tomponyhaino aman-jery karamaolonascorecardsfifamoivoizanaverbiageWhitepaper
Mpamolavola tranonkala mifanohitra amin'ny Web Developers
Aug 18, 2011 amin'ny 4: 21 AM
Afa-tsy ny nieritreretako ny "marketing amin'ny atiny" dia "fivarotana soratra." Na “mivarotra zavatra efa voasoratra” manokana kokoa.
Halako ny hanaiky azy, fa ny 7 amin'ireo 1 no ampiasaiko farafaharatsiny nefa tsy nieritreritra momba azy na 2) tamin'ny tarehy mahitsy tanteraka.
18 Aogositra 2011 amin'ny 2:02 PM
Erik - Mampiasa azy ireo koa aho! Mampalahelo fa mila manaraka ny voambolana farany ampiasaina isika ary mampiasa azy. Sa raha tsy izany dia toa tsy nivoatra isika!
Aug 18, 2011 amin'ny 9: 24 AM
Ity lahatsoratra ity dia nampitsiky ahy, nampiasa ny sasany amin'ireto teny ireto nandritra ny taona maro ary ny sasany kosa tsy mbola……! Ny fizarazarana sy ny tsena dia vanim-potoana ara-barotra foana .. azo antoka fa iray izay nampiasaiko nandritra ny 20 taona lasa izay!
18 Aogositra 2011 amin'ny 2:07 PM
Tadidiko fa rehefa noforonina ireo karazana fitondran-tena ary nanao “fangatahana” fotsiny izahay ary nanamboatra ireo fampielezan-kevitra tamin'ireo 'karazana' ireo. Tsy tadidiko ny niantso azy io fizarazana tamin'izany - na dia efa nisy aza! Avy eo nantsoinay hoe "personas" izy ireo… mety ho tsara kokoa noho izany ny lisitra!
18 Aogositra 2011 amin'ny 2:15 PM
Tiako be ny fanehoan-kevitrao, nohavaoziko Paula !!!
18 Aogositra 2011 amin'ny 2:54 PM
Misaotra Douglas, ny tiako amin'ny lisitra vaovao dia ny manolo ny Popularity, manome fotsiny ny dikany vaovao amin'ny halalin'ny fahalalana, izay mety na tsia ny tranga mazava ho azy, saingy toa tsara! 🙂
23 Aogositra 2011 amin'ny 2:48 PM
Ny fihazana asa dia heverina ho toy ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing, fa tsy fangatahana asa. Tsy nahita "marika manokana" izay nantsoina hoe "mari-pahaizana" aho raha miresaka momba ny mpilatsaka hofidina. Ny tsirairay amin'izao fotoana izao dia manana "marika" izay "mombamomba azy" na "fahaiza-manao fototra" na "tanjaka ambony." Oh, iray hafa ny "antontan-taratasy marketing" nantsoina taloha hoe resume na bio ankehitriny izay nantsoina koa hoe profil "[an-tserasera]." Ny "asa" dia "fotoana" ary ny "olana" dia "fanamby." "Personnel" dia niova ho "loharanon'olombelona" izay niova ho "fahazoana talenta." Ary mandeha ihany… ..
24 Aogositra 2011 amin'ny 3:28 PM
Sombiny mahafinaritra. Te-hahita olona mandaka “leverage” amin'ny voambolana fotsiny aho!
24 Aogositra 2011 amin'ny 5:40 PM
Ry lehilahy! Leverage dia iray amin'ireo tiako indrindra. 🙂
24 Aogositra 2011 amin'ny 5:09 PM
Mampihomehy ary tena marina amin'ny ankamaroan'ny tranga! Saingy heveriko fa ny mpivarotra dia manandrana miteny amin'ny fiteny izay takatry ny mpanjifany sy ny "public marketing umum". Toy ny rafitra sygnal maoderina io.
24 Aogositra 2011 amin'ny 5:41 PM
Manantena aho fa Lana! Mihevitra aho indraindray fa mampiasa ny sasany amin'ireto teny ireto isika ary somary mampatahotra!
Sep 1, 2011 ao amin'ny 4: PM PM
Nihaona tamin'ny agents iray aho omaly izay liana amin'ny fanaovana bilaogy sy marketing amin'ny Internet. Nilaza tamiko izy fa miteny toa ny olona nanangana ny bilaoginy ihany aho. Alefaso aho hieritreritra hoe aiza no tena tiako …… marketing. Heveriko fa rehefa avy namaky fampahalalana be dia be momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny varotra ianao dia mandray ny voambolana fotsiny ianao nefa tsy mahamarika izany.
27 Nov 2011 tamin'ny 4:47 PM
Ary eto aho dia nieritreritra fa ny teny hoe "curation" dia litera efatra. Mijoro tsara aho 😉
Ankafizo ity lahatsoratra ity.
29 Nov 2011 amin'ny 10:32 maraina
Lahatsoratra lehibe ary tena marina momba ny olona mieritreritra zavatra 'mila' hivoatra. Toa ny toetran'ny olona ny mampifandray ny zava-baovao amin'ny zava-baovao sy ny fanatsarana azy rehetra - toa tafiditra ao anatin'izany ny voambolana. Ny iray hafa tsara voatanisa lahatsoratra avy amin'ny socialmediatoday dia ny "synergy" misolo ny "fiaraha-miasa". (http://socialmediatoday.com/node/397449&utm_source=feedburner_twitter&utm_medium=twitter&utm_campaign=autotweets)
Aug 25, 2012 amin'ny 10: 28 AM
Mpanolo-tsaina iray amin'ireo mpitsangatsangana iray izay itako ny làlana tiako ny mampiasa ny teny hoe 'bifurcation' isaky ny fehezanteny fahatelo. Tsy afaka miteny fotsiny hoe 'avy eo dia mizara roa isika.' Heveriko fa afaka mandoa vola bebe kokoa ianao rehefa tsy takatry ny olona ianao.
Handray olana amin'ny 'antso hanao hetsika' aho. Manana boky fanoratana aho tamin'ny taona 1920 izay misy toko natokana hanamboarana antso an-tariby hanery. Izay mampiasa azy mitovy dika amin'ny hoe "doka banner" dia tsy manana sehatra ara-barotra matotra.